Warar | Dadweyne – U Adeegaha Dadweynaha | Page 4
Kenya: Xaaska Nin lala xiriirinayo Daacish oo lagu sii haynayo Xabsiga.
Maxkamadda magaalladda Nairobi waxaa shalay la soo taagay Nuseyba Maxamed Xaaji oo Arday barata Cilmiga Dhakhtarnimadda ka ah Isbitaalka Mubende ee dalka Uganda, taasi oo la sheegay inay u dhaxda Nin ay Hay’addaha Ammaanka Kenya ku eedeynayaan inuu qorsheynayey inuu weerar ka geysto Kenya. Haweeneydaasi wax dacwado ah laguma soo oogin, kadib, markii ay Baarayaasha Boliska ka codsadeen Xeer-beegtida Maxkamadda ...
Dowladda Finland oo Lacag ugu yaboohday Barnaamijka Hiigsiga Cusub ee Somalia.
War Saxaafadeed ka soo baxay Bangiga Adduunka (Worl Bank) ayaa lagu sheegay inay Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee dalka Finland shalay Heshiis kula saxiixdeen magaalladda Nairobi, iyadoo Dowladda Finland ku wareejiyeen Bangiga Adduunka lacah dhan 4 million oo Euro oo loogu talagalay Taabagelinta Hiigsiga cusub ee Somalia. Safiirka Finland u jooga Somalia, Ambassador Tarja Fernández oo ka hadlay Munaasabadaasi ayaa sheegay ...
Ku-xigeenka Ra’isul-wasaaraha oo ka qeybgalay xil wareejinta Guddoomiyaha cusub ee Maxkamadda Sare
Ra’iisul Wasaare-ku-xigeenka Xukuumada Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cumar Carte ayaa ka qeybgalay munaasabad ay xilka kula kala wareegayeen guddoomiyaha cusub ee Maxkamadda Sare Dr. Ibraahim Iidle Suleyman, kaasoo xilka kala wareegayay guddoomiyihii hore ee Maxkamada sare Mudane Avv. Caydiid Ilka-xanaf. Munaasabadan oo ka dhacday xarunta Maxkamadda Sare ayaa waxaa kale oo ka soo qeybgalay Wasiiro, xildhibaano, saraakiil iyo howlwadeenada garsoorka, ...
Ra’isul-wasaaraha oo Ururada Dhalinyarada kala hadlay ka qeybgalka dhalinta ee siyaasada
Ra’iisal Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Sharmarke ayaa maanta qaabilay dhalinyaro mataleysay qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka, waxaana kulankan ku wehlinayay xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka. Kulankan oo ka dhacay xafiiska Ra’iisal Wasaaraha ayaa diirada lagu saaray sidii loo dhiiragelin lahaa dhalinyarada si ay qeyb uga noqdaan hanaanka geedi socodka doorashada dalka ee 2016 iyo sidii ay uga ...
Kenya oo mar kale ku celisay inay xirayaan Xeradda Dhadhaan iyo Kakuma
Wasiirka Maaliyadda ee Kenya, Henry Rotich ayaa hadalkaasi ka sheegay mar uu ka hadlayey Munaasabadda 56-guuradii ka soo wareegtay markii la asaasay Ururka Midowga Europe, oo shalay lagu qabtay magaalladda Nairobi. Waxa uu sheegay inay u baahan yihiin in Xal saaxiibtinimo loo helo Qaxootiga, si aan looga been sheegin Canshuur-bixiyayaasha Kenya, waa sida uu hadalka u yiri. Wasiirka Maaliyadda ee ...
Omar Faaruuq Osman oo Nairobi lagu xiray Kharaj uu kala soo baxsaday Shirkad Kenyan ah.
Cumar Faaruuq Cismaan oo Maxkamad horteeda kaga calaacalay inuusan Baasaboor la’aan joogi karin magaalladda Nairobi. Wargeyska Kenya Observer ee ka soo baxa magaalladda Nairobi ayaa maanta qoray in Gacanta Dheer ee Sharciga uu ugu dambeyn gacanta ku soo dhigay Muwaadin Somali oo lagu maagacaabo Omar Faruk Osman, kaasi oo lagu lahaa Qaan muddo haatan laga joogo 5 sanno, xilligaasi oo ...
Museveni oo lagu cadaadiynayo inuusan Ciiddankiisa kala bixin Somalia
Madaxweynaha Uganda, Yoweeri Museveni waxa uu Kulan la qaatay Danjiraha Maraykanka iyo Madaxa Ergadda Yurub ee u jooga dalka Uganda, Ambasasdor Deborah Malac iyo Kristian Schmidt, waxayna ka wada hadleen Horumarka dhinaca Siyaasadda iyo Doorashooyinka Uganda iyo Qorshaha Dowladda Uganda ee Ciiddankeeda qeybta ka ah Hawlgalka AMISOM. Xoghayaha Warbaahinta ee Madaxtooyadda Uganda, Linda Nabusayi ayaa u sheegtay Wargeyska The Monitor ...
Sheekh Maxamed Idris oo laga cabsi qabo in lagala laabto Dhalashadda Maraykanka
Xukuumadda Federalka ee Maraykanka ayaa sheegtay in nin loo aqoonsan yahay Sheekh Muslim ah oo caan ah uusan lahayn niyad uu ku sii ahaado Muwaadin Maraykan (A U.S. citizen). Xafiiska Xeer-ilaalinta Maraykanka ayaa doonaya inay Sheekh Maxamed Idris Axmed kala laabtaan Muwaadinnimadda Maraykanka oo la siiyey sannadkii 2003-dii. Dacwad-oogayaasha ayaa sheegay inuu Sheekhu labo xaas leeyahay, isla markaana uu u safray ...
Maraykanka oo maanta lagu maxkamadaynayo Soomaali ku biiri lahayd Daacish
Dacwad-oogayaasha Federalka ee magaalladda Minneapolis ee dalka Maraykanka waxay maanta mar kale dib u dhegeysan doonaan mid ka mid ah Kiisaska ugu weyn ee Argagixisadda. Saddex Dhallinyaro Somali oo lagu kala magacaabo C/raxmaan Daa’uud oo 22-jir ah, Maxamed Faraax oo 22-jir ah iyo Guuleed Cumar oo 21-jir ah ayaa la soo taagayaa Maxkamadda, kuwaasi oo ku eedeysan inay ku biiri ...
DEGEG: Dad lagu dilay Is-qarxin ka dhacday Xarunta Taraafikadda.
Ilaa 6 qof ayaa la sheegay inay ku geeriyoodeen Fal Isqarxin ah oo saakayto lala beegsaday Xarunta Taraafikadda ee Degmadda C/casiis ee magaalladda Muqdisho. Goobjoogayaal ayaa sheegay in Nin naftiisa soo biimeeyey oo watay gaari isku qarxiyey Albaabka laga galo Xarunta Taraafikadda, wuxuuna qaraxaasi sababay dhimasho, dhaawac iyo burbur soo gaaray Dhismahaasi. Dhowr qof oo rayid ahaa oo ku sugnaa ...